Abuu Muscab “Itoobiya Jilbaha Ayaan Dhulka Ugu Dhufan Doonnaa Mana Suurtageli doonto in ay Magaca AMISOM Ku Qabsato Dhulka Soomaaliyeed” |
Abuu Muscab “Itoobiya Jilbaha Ayaan Dhulka Ugu Dhufan Doonnaa Mana Suurtageli doonto in ay Magaca AMISOM Ku Qabsato Dhulka Soomaaliyeed”
Sheekh Caabdi Caziiz Abuu Muscab afhayeenka ciidamada xarakada Als-habab ayaa sheegay in ciidamada xabashida itoobiya ee shaatiga AMISOM usoo gashaday qabsashada dhulka soomaaliyeed aysan ku guuleysan doonin damacooda.
isagoo warbaahinta lahadlayay ayuu sheegay in dowladda Itoobiya ku fashilantay qorshaheedi ahaa in ay soomaaliya qabsato wuxuuna tusaale usoo qaatay in ciidamada Alshabaab ay muddo laba sanadood ah xabashida kula dagaalamayaan gobolada dalka ah dagaalkaasi oo keenay in magaalooyinka qaar ay isaga baxdo halka meelaha ay ku sugantahay aysan ku dhaq dhaqaaqi Karin.
Taliska ciidanka Al shabaab ayaa ku goodiyay in xabashida Itoobiya ay jilbaha dhulka ugu dhufan doonaan ayna ka adkaan doonaan Itoobiyaanka shaarka cusub usoo gashtay qabsashada dhulka soomaaliya.
Sheekh Abuu Muscab ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay difaacdaan maamuladooda islaamiga ah ee sharciga islaamka dalka ku maamulaya islamarkaana amnniga iyo nabadgelyada dalka kusoo dabaalay.
Colaad gaamurtay ayaa udhaxaysa Itoobiya iyo soomaaliya waxaana muuqata in mujaahidiinta soomaaliya ay dhabarka ka jabinayaan kumanaan ciidamo Afrikaan ah oo ka socda inkabadan 6 dowladood oo Nasaara ah kuwaasi oo taageero caalami ah ka helaya reer galbeedka.